အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုရေးသားရာတွင် သွက်လက်ချောမွေ့မှုရှိခြင်း (Becoming Fluent in Speaking and Writing English) - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုရေးသားရာတွင် သွက်လက်ချောမွေ့မှုရှိခြင်း (Becoming Fluent in Speaking and Writing English)
Posted by Myanmar Network on May 25, 2012 at 15:59 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုရေးသားရာတွင် သွက်လက်ချောမွေ့မှုရှိခြင်း (Becoming Fluent in Speaking and Writing English by Alireza Zarea)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သွက်သွက်လက်လက် ချောချောမွေ့မွေ့ ပြောဆိုချင်တယ်ဆိုရင် အခုပေးမယ့် အကြံအတိုင်း လိုက်နာပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားသင်ရာမှာ တတ်မြောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ၄မျိုးရှိပါတယ်။ အဖတ်၊ အကြား၊ အပြောနဲ့ အရေး ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုရမယ့် အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ အဖတ်နဲ့ အကြား ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာ လက်ခံရယူတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်ပြီး အပြောနဲ့ အရေးကတော့ ထုတ်ဖော်သိစေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရရင် အပြောနဲ့ အရေး ကျွမ်းကျင်မှုတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ အဖတ်နဲ့ အကြား ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အရင်ဆုံး ပိုင်နိုင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပိုင်နိုင်လာဖို့ နည်းလမ်းအချို့ ရှိပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ် ပြောပြပါမယ်။
တတ်နိုင်သလောက် စာများများ ဖတ်ပါ။ စာဖတ်တဲ့နေရာမှာ တက်ကြွတဲ့ စာဖတ်ပုံမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ ဆိုလိုတာက စာဖတ်နေရင်း စာရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ စကားလုံးအသစ်အဆန်းတွေ စသည်ဖြင့် စဉ်းစားပြီး ဖတ်ရမယ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ သဒ္ဒါတည်ဆောက်ပုံတွေကို မတတ်မချင်း လေ့လာဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဖတ်တဲ့စာထဲမှာ ပါတဲ့ စကားလုံးအသစ်အဆန်းတွေအားလုံးကို နားမလည်မချင်း မှတ်သားဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပထမတစ်ကြိမ်တွေ့ပြီး အခြား စာပိုဒ်တွေ ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်တွေမှာ ပြန်တွေ့ရင် သြော် ဒါတွေ့ဖူးတယ် ဆိုပြီး မှတ်မိရမယ်။ အဲဒီလို မှတ်မိပြီဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ မှတ်စုစာအုပ် တစ်အုပ်ထားပြီး အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးတွေ စကားစုနဲ့ ၀ါကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကို မှတ်သားထားမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတယ်။ စစချင်း ဖတ်ဖို့ Penguin Readers (ပင်ဂွင်ဖတ်စာ)စာအုပ်တွဲတွေကို ညွှန်းလိုပါတယ်။ စကားအသုံးအနှုန်း ခက်ခဲမှု အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပေးထားတဲ့ စာစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
အကြားကျွမ်းကျင်မှုအတွက် နည်းလမ်း ၂မျိုး ရှိပါတယ်။
စာဖတ်တဲ့အပြင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀လောက် အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကို နားထောင်ပေးတဲ့ နည်းလမ်း။
စာဖတ်တာကိုဘဲ အဓိကအာရုံစူးစိုက်ပြီး ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်တဲ့နည်းလမ်း။ အကြားကျွမ်းကျင်မှုကို နောက်မှ တည်ဆောက်ယူလို့ ရပါတယ်။
စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ ဒုတိယနည်းလမ်းကို ပိုသဘောကျတယ်။ အဖတ်ကျွမ်းကျင်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ပြောဆိုနေသူတွေလိုဘဲ ဖတ်နိုင်ပြီဆိုရင် အကြားကျွမ်းကျင်မှုဟာ အလိုအလျောက် တိုးတက်လာတယ်။ ဦးနှောက်ထဲကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ လက်ခံရယူထားတာတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့အတွက် စကားတစ်ခွန်းကြားလိုက်တာနဲ့ နောက်ဘာဆက်ပြောတော့မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင် လာလိမ့်မယ်။ အခုလိုပြောတဲ့အတွက် အကြားကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်ဖို့ မလိုဘူးလို့တော့ မဆိုလိုဘူး။
အကြားကျွမ်းကျင်လာအောင် ကလေးတွေအတွက် အထူး ပြုစုထားတဲ့ ကာတွန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင်ကား တွေကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ စကားအသုံးအနှုန်း လွယ်ကူပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ စကားစုတွေ ဒါမှမဟုတ် ဘန်းစကားတွေ မပါဘူး။ အကြားကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင် နေ့စဉ် ဗီအိုအေ ဒါမှမဟုတ် ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ချက်တွေကို နားထောင်နိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း တက်ကြွတဲ့ နားထောင်တာမျိုးဖြစ်စေရမယ် ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ မှတ်စုနဲနဲ လိုက်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီအကြံတွေအတိုင်း လိုက်နာပြီး ကြိုးစားလေ့လာမယ်ဆိုရင် အပြောနဲ့ အရေး ကျွမ်းကျင်မှုတွေ အလိုအလျောက် တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နဲနဲ ထပ်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်။
[ Alireza Zarea ၏ Becoming Fluent in Speaking and Writing English အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။]
အင်ျဂလိပျဘာသာစကား ပွောဆိုရေးသားရာတှငျ သှကျလကျခြောမှမှေု့ရှိခွငျး (Becoming Fluent in Speaking and Writing English by Alireza Zarea)
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို သှကျသှကျလကျလကျ ခြောခြောမှမှေ့ေ့ ပွောဆိုခငျြတယျဆိုရငျ အခုပေးမယျ့ အကွံအတိုငျး လိုကျနာပွီး ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ အင်ျဂလိပျစကားသငျရာမှာ တတျမွောကျဖို့ လိုအပျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှု ၄မြိုးရှိပါတယျ။ အဖတျ၊ အကွား၊ အပွောနဲ့ အရေး ကြှမျးကငျြမှုတှေ ဖွဈပါတယျ။
သတိပွုရမယျ့ အရေးကွီးဆုံးအခကျြကတော့ အဖတျနဲ့ အကွား ကြှမျးကငျြမှုတှဟော လကျခံရယူတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှဖွေဈပွီး အပွောနဲ့ အရေးကတော့ ထုတျဖျောသိစတေဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှေ ဖွဈပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ဆိုရရငျ အပွောနဲ့ အရေး ကြှမျးကငျြမှုတှေ တိုးတကျကောငျးမှနျစဖေို့ အဖတျနဲ့ အကွား ကြှမျးကငျြမှုတှကေို အရငျဆုံး ပိုငျနိုငျထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို ပိုငျနိုငျလာဖို့ နညျးလမျးအခြို့ ရှိပါတယျ။ အကဉျြးခြုပျ ပွောပွပါမယျ။
တတျနိုငျသလောကျ စာမြားမြား ဖတျပါ။ စာဖတျတဲ့နရောမှာ တကျကွှတဲ့ စာဖတျပုံမြိုး ဖွဈရမယျ။ ဆိုလိုတာက စာဖတျနရေငျး စာရဲ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံ၊ စကားလုံးအသဈအဆနျးတှေ စသညျဖွငျ့ စဉျးစားပွီး ဖတျရမယျ။ ရှုပျထှေးတဲ့ သဒ်ဒါတညျဆောကျပုံတှကေို မတတျမခငျြး လလေ့ာဖို့ ဒါမှမဟုတျ ဖတျတဲ့စာထဲမှာ ပါတဲ့ စကားလုံးအသဈအဆနျးတှအေားလုံးကို နားမလညျမခငျြး မှတျသားဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပထမတဈကွိမျတှပွေီ့း အခွား စာပိုဒျတှေ ဒါမှမဟုတျ စာအုပျတှမှော ပွနျတှရေ့ငျ သွျော ဒါတှဖေူ့းတယျ ဆိုပွီး မှတျမိရမယျ။ အဲဒီလို မှတျမိပွီဆိုရငျ လုံလောကျပါတယျ။ မှတျစုစာအုပျ တဈအုပျထားပွီး အရေးကွီးတဲ့ စကားလုံးတှေ စကားစုနဲ့ ၀ါကဖြှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံတှကေို မှတျသားထားမယျဆိုရငျ ပိုကောငျးတယျ။ စစခငျြး ဖတျဖို့ Penguin Readers (ပငျဂှငျဖတျစာ)စာအုပျတှဲတှကေို ညှနျးလိုပါတယျ။ စကားအသုံးအနှုနျး ခကျခဲမှု အဆငျ့အလိုကျ ဖျောပွပေးထားတဲ့ စာစဉျ ဖွဈပါတယျ။
အကွားကြှမျးကငျြမှုအတှကျ နညျးလမျး ၂မြိုး ရှိပါတယျ။
စာဖတျတဲ့အပွငျ နစေ့ဉျ မိနဈ ၃၀လောကျ အင်ျဂလိပျစကားပွောတာကို နားထောငျပေးတဲ့ နညျးလမျး။
စာဖတျတာကိုဘဲ အဓိကအာရုံစူးစိုကျပွီး ကြှမျးကငျြအောငျ လုပျတဲ့နညျးလမျး။ အကွားကြှမျးကငျြမှုကို နောကျမှ တညျဆောကျယူလို့ ရပါတယျ။
စာရေးသူအနနေဲ့ကတော့ ဒုတိယနညျးလမျးကို ပိုသဘောကတြယျ။ အဖတျကြှမျးကငျြပွီး အင်ျဂလိပျဘာသာကို မိခငျဘာသာအဖွဈ ပွောဆိုနသေူတှလေိုဘဲ ဖတျနိုငျပွီဆိုရငျ အကွားကြှမျးကငျြမှုဟာ အလိုအလြောကျ တိုးတကျလာတယျ။ ဦးနှောကျထဲကို အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ လကျခံရယူထားတာတှေ အမြားကွီး ရှိနတေဲ့အတှကျ စကားတဈခှနျးကွားလိုကျတာနဲ့ နောကျဘာဆကျပွောတော့မယျဆိုတာ ခနျ့မှနျးနိုငျ လာလိမျ့မယျ။ အခုလိုပွောတဲ့အတှကျ အကွားကြှမျးကငျြအောငျ လကေ့ငျြ့ဖို့ မလိုဘူးလို့တော့ မဆိုလိုဘူး။
အကွားကြှမျးကငျြလာအောငျ ကလေးတှအေတှကျ အထူး ပွုစုထားတဲ့ ကာတှနျးတှေ ဒါမှမဟုတျ ရုပျရှငျကား တှကေို ညှနျးခငျြပါတယျ။ စကားအသုံးအနှုနျး လှယျကူပွီး ရှုပျထှေးတဲ့ စကားစုတှေ ဒါမှမဟုတျ ဘနျးစကားတှေ မပါဘူး။ အကွားကြှမျးကငျြလာပွီဆိုရငျ နစေ့ဉျ ဗီအိုအေ ဒါမှမဟုတျ ဘီဘီစီ အသံလှငျ့ခကျြတှကေို နားထောငျနိုငျတယျ။ ဒီနရောမှာလညျး တကျကွှတဲ့ နားထောငျတာမြိုးဖွဈစရေမယျ ဆိုတာကို သတိပွုပါ။ မှတျစုနဲနဲ လိုကျပေးရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
ဒီအကွံတှအေတိုငျး လိုကျနာပွီး ကွိုးစားလလေ့ာမယျဆိုရငျ အပွောနဲ့ အရေး ကြှမျးကငျြမှုတှေ အလိုအလြောကျ တိုးတကျလာတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ နဲနဲ ထပျပွီး ကွိုးစားအားထုတျလိုကျရုံနဲ့ ပွီးပွညျ့စုံသှားနိုငျပါတယျ။
[ Alireza Zarea ၏ Becoming Fluent in Speaking and Writing English အားဆီလြျောသလို ဘာသာပွနျဆိုထားပါသညျ။]
Permalink Reply by pyaepyae on May 25, 2012 at 16:36
Permalink Reply by may zon on May 25, 2012 at 16:40
Thanksalot. i'm just now learning to beginner.
Permalink Reply by Tun Tun Win on May 25, 2012 at 16:56
I made self-study in English for2years. I am getting improve in reading, writing and listening but I cannot speak very well.
So, how can I improve my English speaking skill?
Permalink Reply by jazzcot on May 28, 2012 at 13:46
attend classes and speak wit someone regularly
Permalink Reply by Aung Kaung on June 6, 2012 at 16:50
Well... You have to practice it everyday.
Permalink Reply by 39v8qv4rkp68t on May 25, 2012 at 19:00
Permalink Reply by bluestar on May 25, 2012 at 19:54
Permalink Reply by theinthansukyaw on May 25, 2012 at 23:57
thanks.next time ,I want to read like this post.
Permalink Reply by hinnayee on May 26, 2012 at 9:57
Permalink Reply by Soe Nandar Aung on May 26, 2012 at 12:18
noted with thanks.. really help mealot... :)
Permalink Reply by Khaung Long on May 26, 2012 at 12:28
Permalink Reply by thin yadanar on May 26, 2012 at 17:34